Calculator ကို Plus အား | all-in-one ဂဏန်းတွက်စက် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » Calculator ကို Plus အား
Calculator ကို Plus အား APK ကို
Calculator ကို Plus အား လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ် ဓာတ်ပုံကိုဂဏန်းတွက်စက်မရှိအချိန်ဆိုသင်္ချာညီမျှခြင်းဖြေရှင်းဖို့ scan! မသာပါကအဘယ်သို့ပြုနိုင် သိပ္ပံနည်းကျဂဏန်းတွက်စက် နှင့် သင်္ချာဂဏန်းတွက်စက် လုပျနဲ့တူ ကဲကုလတွက်ချက်မှု, trigonometric တွက်ချက်မှုဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့အဖြစ်ပြုမူ GPA ဂဏန်းတွက်စက်, BMI ဂဏန်းတွက်စက် ပင်လျှော့စျေးဂဏန်းတွက်စက်! ၎င်း၏ရုပ်ပုံကိုဂဏန်းတွက်စက်စကင်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူ, တွက်ချက်မှုဒါလွယ်ကူပြီးပျော်စရာခဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့သည်!all-in-one ဂဏန်းတွက်စက်, Multi - functional
တဦးတည်းတစ်ခုတည်း app ကိုစထုပ်ပိုးအစွမ်းထက်တွက်ချက် functions များ, Calculator ကို Plus အားရုံဓါတ်ပုံကိုသင်္ချာဂဏန်းတွက်စက်ထက်ပိုပါတယ်။ ဒါဟာအနည်းငယ်အမည်ကိုမှ, သင့် GPA ရမှတ်များနှင့် BMI တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။
လွယ်ကူပြီးပျော်စရာဓာတ်ပုံဂဏန်းတွက်စက် / ရုပ်ပုံဂဏန်းတွက်စက်,
အစွမ်းထက်ဓာတ်ပုံကိုသင်္ချာဂဏန်းတွက်စက်နည်းပညာနှင့်အတူအကြံအဖန်, သင်သည်သင်၏ကင်မရာကိုရန်ခက်ခဲသင်္ချာပြဿနာတွေနဲ့သင်္ချာတွက်ချက်မှုထားခဲ့နိုင်သည်။ built-in ကင်မရာဂဏန်းတွက်စက်စကင်နှင့်အတူသင်္ချာညီမျှခြင်းဖြေရှင်းဖို့ scan, ကဲကုလပြဿနာများနည်းတူလွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အပြင်အစွမ်းထက်ဓာတ်ပုံကိုဂဏန်းတွက်စက်ကနေ, ကပိုက်ဆံအမှုအရာအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသောငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုသုံးပြီး, သင်ရိုးရှင်းစွာအရေအတွက်ရိုက် Calculator ကို Plus အားဖြင့်သင်၏ရှေးခယျြသောငွေကြေးကိုသို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
GPA ဂဏန်းတွက်စက်, သင့်ရမှတ်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်
သင့်ရဲ့ GPA ရမှတ်တွက်ချက်, GPA ဂဏန်းတွက်စက်သင်သည်သင်၏ GPA ရမှတ်တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ Calculator ကို Plus အားရုံသင်္ချာဂဏန်းတွက်စက်သို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံကိုဂဏန်းတွက်စက် app ကိုထက်ပိုပါတယ်။
Calculator ကို Plus အားဖြင့်သင်သည် trigonometric နှင့်ကဲကုလပြဿနာများအဖြစ်ရှုပ်ထွေးသင်္ချာညီမျှခြင်းဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ Calculator ဒါလွယ်ကူသောဖူးပါ။
တစ်ဦးကသင်္ချာဂဏန်းတွက်စက်တစ် GPA ဂဏန်းတွက်စက်, Calculator ကို Plus အားတဦးတည်းအတွက်အရာများစွာကိုဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်နာမတော်ယူနစ် converter နဲ့ကင်မရာကိုဂဏန်းတွက်စက်, Calculator ကို Plus အား app နဲ့ဓာတ်ပုံကိုဂဏန်းတွက်စက်စကင်နဲ့တူလူအပေါင်းတို့သည်အစွမ်းထက်အင်ျဂါရရ - သင်ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့မတ်ဂဏန်းတွက်စက်ကိုသုံးလွန်းအများအပြား apps များ download လုပ်ရန်မလိုပါ။
Calculator ကို Plus အားလှညျ့စားနဲ့အထင်မြင်မှားစေသောကြော်ငြာဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်း။
သငျသညျသူတို့အားကြော်ငြာများ၏တဦးတည်းကိုဖြတ်ပြီးလာနေလျှင်, like_art@outlook.com မှအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့အားသတင်းပို့ကျေးဇူးပြုပြီး
Calculator ကို Plus အားနှင့်အတူသင်္ချာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဓာတ်ပုံကိုယူပါ။
11.44 ကို MB